Fabio Coentrao Oo Shaaciyay Ciyaarahanka Kaliya Ee La Hadlo Tan & Markii Uu Kasoo Tegay Real Madrid %
Xidigaan, kaasoo hada si amaah ah kula jooga naadiga kubada cagta Sporting Lisbon ee wadankiisa hooyo ee Portugal ayaa waxaa la weydiiyay ciyaaryahanka kaliya ee uu la hadlo, kaasoo Real Madrid ka tirsan, tan iyo markii uu caasimada Spain ka tegay.
Fabio Coentrao, oo ahaa mid kamid ah daafacyadii ugu fiicnaa ee sanadihii dambe soo maray Madrid, ayaa waxaa uu hada nolal wacan uu ku qadaanayaa wadankiisa, isagoona rajayanaya inuu inta ka dhiman xirfadiisa uu halkaas joogo.
“Waxaan halkaas ku leeyahay saaxiibo badan, mana jiro qof aan ku qabo wax dhibaato ah,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Fabio Coentrao.
“Waqtigaan oo aan ku suganay halkaan, kaliya waxaan la hadlaa Cristiano Ronaldo, kaasoo ah saaxibkeyga ugu fiican iyo midka dunida ugu wanaagsan.
“Waxaan intaas dheer in macalinka jooga Real Madrid, waan la hadlaa mararka qaarkood,” ayuu qirtay, xidigaan lugta bidix ku dheela.
“Dhamaantooda waan dhageystaa, balse Cristiano waa mid kaliya ee aan la hadlo, marka garoonka aan ku jiro, sababtoo ah, waa saaxibeyga koowaad,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Fabio Coentrao, waqti fiican Madrid lasoo qaatay.
Fabio CoentraoLa LigaSporting Lisbon
Ter Stegan & Valverde Oo Sababo Oo Isku Mid Ah Uga Dalbaday Iniesta Inuu Barca Sii Joogo Xagaaga Dambe